Ihe Ndị Ị Ga-eburu n’Uche Gbasara Indoneshia—Okpukpe Ha, Ala Ha, Ndị Bi na Ya
Otú Ala Ya Dị Indoneshia dị n’agbata Ọstrelia na kọntinent a na-akpọ Eshia. Ọ bụ obodo kacha nwee agwaetiti n’ụwa niile. E nwere ihe karịrị puku agwaetiti iri na asaa na narị ise na ya. Ọtụtụ n’ime ha nwere ugwu ndị elu ha na-adịghị larịị na oké ọhịa. Indoneshia bụkwa obodo kacha nwee ugwu na-agbọpụ ọkụ n’ụwa. E nwere ihe karịrị otu narị ugwu na-agbọpụ ọkụ na ya.
Ndị Bi na Ya Indoneshia bụ obodo nke anọ ndị mmadụ kacha biri n’ụwa. Atọ ndị mbụ bụ Chaịna, India, na Amerịka. E nwere ihe karịrị narị agbụrụ atọ n’Indoneshia. E kee ndị bi na ya ụzọ iri, ihe dị ka ụzọ isii bụ ndị Javan na ndị Sudan.
Okpukpe Ha Ihe dị ka mmadụ itoolu n’ime ndị Indoneshia iri ọ bụla bụ ndị Alakụba. Ndị ọzọ bụ ndị Hindu, ndị Buda, na ndị sịrị na ha bụ Ndị Kraịst. Ọtụtụ na-ekpe okpukpe ọdịnala.
Asụsụ Ha E nwere ihe karịrị narị asụsụ asaa a na-asụ n’Indoneshia. Ma, ọ bụ Indoneshian ka a kacha asụ. Ebe e si nweta ya bụ n’asụsụ Malei. Ọtụtụ na-asụkwa asụsụ obodo ha n’ụlọ ha.
Ihe Ha Na-arụ Ọtụtụ na-arụ ọrụ ugbo ma ọ bụ na-azụ ahịa. Ha nwekwara osisi na mmanụ nakwa akụ̀ ndị ọzọ dị n’ime ala. Indoneshia so n’obodo ndị kacha nwee rọba na mmanụ nri.
Nri Ha Na-eri Nri ndị Indoneshia na-erikarị bụ osikapa. Nri ndị ọzọ bụ osikapa e ji àkwá na akwụkwọ nri sie, anụ a mịrị amị, na salad a na-etinye ahụekere a kwọrọ akwọ.
Otú Ebe ahụ Na-adị Ọ na-ekpokarị ọkụ. Ifufe a na-akpọ Monsoon, nke na-esi n’oké osimiri, na-eme ka e nwee udu mmiri na ọkọchị. Égbè eluigwe na-agbakarịkwa n’Indoneshia.
NDỊ NKWUSA OLE NỌ NA YA N’AFỌ 2015
NDỊ BỊARA NCHETA ỌNWỤ JIZỌS N’AFỌ 2015